Iyo LTE yeApple Watch Series 3 inogona chete kushandiswa munyika yekutenga | Ndinobva mac
Iyo LTE yeApple Watch Series 3 inogona chete kushandiswa munyika yekutenga
Isu hatisi kuti iko kushandisa kazhinji zviri pachena, tiri kutaura nezvesarudzo dzeLTE dzemuenzaniso mutsva uyu uye zvinoita sekudaro Kubatana kweApple Watch LTE kunogumira kune nyika yekutenga. Izvi zvinomutsa kusahadzika kwakawanda uye mibvunzo pakati pevashandisi vanoda kutenga iyo itsva wachi yemhando uye haina musoro.
Kwechinguva ngatifungei kuti tinofamba zvakawanda uye la Apple Watch muganho maererano nekushandiswa kweLTE chip munyika yekutenga iko kunetsa kukuru kune uyu mushandisi. Muchidimbu, isu hatitende kuti idzi inhau dzakanaka kwatiri uye ruzivo urwu runofanira kutakurwa mundangariro usati watanga kutenga.
Kune rimwe divi, iri zvakare iri dambudziko rakakomba izvo zvakaitika muUnited States neanoshanda T-Mobile, iyo haibvumidze vashandisi veiyi nyowani Apple Watch Series 3 kuti vashandise nekukurumidza network kupfuura 3G. Izvi zvinogona kuve nerondedzero yekuti havadi kugutsa netiweki ne "kufamba" kweApple Watch, asi iri rimwe dambudziko rakawedzerwa iro vanoshanda mune dzimwe nyika vane mukana wewachi iyi vanofanira kusangana nayo.
Mune chinyorwa chakapfuura pamusoro peiyo itsva Apple wachi ini ndakati kana kufunga nezve mukana wekutenga wachi muUnited Kingdom kana kunyangwe muFrance kuti ndikwanise kunakidzwa nezvinhu izvi zvitsva muSpain apo varidzi vakapa inoenderana data hurongwa, ini zvakare rangarira kuti mabhendi akatsigirwa neApple Watch muFrance ndiwo chaiwo atinawo kuSpain, izvo zvisina kuverengerwa ndezvekuti opareta chaiye ndiye aive achitungamira kuisa rudzi urwu rwe "marambidzo" pakushandiswa kweLTE yekubatanidza, tichaona sei zvese zvinopera uye kunyanya kana iyo Series 3 inowanikwa yekutenga munyika medu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo LTE yeApple Watch Series 3 inogona chete kushandiswa munyika yekutenga
Carlos De Vincenzo akadaro
Pindura Carlos De Vincenzo
Mhoro! Kubva pane zvandino fungidzira ingori fungidziro, handiti? Ini ndinonzwisisa kuti kambani haigoni kuvharira mudziyo, uye kudzivirirwa kwenzvimbo kana tikaona muAmerican online chitoro chemaapuro tinogona kuona kuti zvinoratidza kuti kana tine kambani yekuAmerica hatizokwanise kuishandisa kune imwe nyika, zvinoita kwete kuratidza chero chinhu pamusoro pekuti tinofamba newadhi yedu yeapuro uye isu takaburitsa rakasiyana dhata data.
Mashandisiro aungaita MacBook yako nechiratidziro chekunze chine muvharo wakavharwa